Bolero Jacket okanye Shrug - Okunye
Bolero Jacket okanye Shrug
Ibhatyi ye-bolero okanye i-shrug longezo elinobuqili kunye nelingapheliyo kuyo nayiphi na ikhabethe elijikelezileyo. Ukongeza ekubeni ngamaqhekeza asebenzayo aqhuba kakuhle xa umoya ufumana ukubethabethana, ezi zinto zingaphezulu zibonisa ezinye iindlela ze-chic kwii-cardigans ezisisiseko, iisheyali kunye neebhatyi.
Ngokwamagama alula, amahlombe akhula ngokukhawuleza. Bahlukile, nangona kunjalo, kuba banqunyulwe ngaphezulu kunesiqhelo somthi osikiweyo. Uyilo lwabo olufinyeziweyo lubenza bagqibelele ngakumbi ngokunxiba iilokhwe kunye neziketi, kodwa banobuchule obaneleyo bokubhangqa nayo yonke into ukusuka kwiincopho ezinde nangamajean anebala elimnyama ukuya kwiitanki ezilula kunye neebhulukhwe ezibalekayo. Zifumaneka ngemikhono emide kunye nemifutshane, kwaye zihlala zizixhobo zoyilo.
Iidyasi zeFashoni yasetyhini yabasetyhini
Imifanekiso yeeNtshontsho zaBasetyhini zaBasetyhini
Igalari yeeNdlela eziPhezulu zeFashoni yaBasetyhini
Kukho, nangona kunjalo, i-dressier shrugs eyilelwe ukunxiba ngokuhlwa, kwaye ezi zihlala zibonisa ubukhazikhazi obucacileyo beenkcukacha ezithile (ezinje ngeekhola ezirhabaxa okanye ukukhonkxa okuntsonkothileyo) okanye ngokusebenzisa izinto ezibuthathaka, njengesilika kunye neentsiba.
Malunga neebhatyi zeBolero
Ngokwahlukileyo, iibhatyi zebolero ziyadressa kwaye zihlala zibonwa ngokuhlwa. Ifumaneka ngohlobo olude nolufutshane olunemikhono, ii-boleros zinqunqiwe kwaye zilungelelaniswe kakuhle. Baqhuba i-gamut emathanjeni angenanto kwaye kulula ukuyiphicotha kwaye inzima.
Abaqambi baya kuhlala banika ii-boleros ezinxibe ngokugqithileyo unyango lwe-couture, bazincamathisela ngazo zonke iindlela zokuhombisa- cinga ngoboya, iintsiba, inquma kunye nezitena zentsimbi, ukubala nje ezimbalwa. Ezinye zenziwe ngofele kwaye zenzelwe ukuba zifane neebhatyi ezincinci. Ngokwahlukileyo, ezona ndlela zilula ziyafumaneka ngemibala eqinileyo, ezenziwe ngee-knits ezithambileyo kwaye zisebenza kakuhle phantse kuzo zonke ezinye iimpahla. Khetha iilokhwe zangokuhlwa zize nee-boleros ezifanayo.
Ukwenza isitayile seBolero Jacket okanye iSrug
Ukuchonga indlela yokunxiba ibhatyi ye-bolero okanye i-shrug kuya kuqinisekisa ukuba ufumana olona mileage kuthengiso lwakho. I-Boleros ngokukodwa ayithandi ukuza ngexabiso eliphantsi, kwaye isiqwenga esikumgangatho ophezulu sinokukubuyisela umva ngekhulu leedola (nangona iinguqulelo ezingabizi kakhulu zikhona). I-Shrugs, okwangoku, ngamaqhekeza aphezulu otyalo-mali angenakuyiphula i-bhanki-enyanisweni, unokuthenga izinto ezininzi kwifoto enye ngexabiso elifanelekileyo.
Ukuba ufuna ibhatyi yebolero oza kuyinxiba ngeendlela ezahlukeneyo zokunxiba, khetha umbala ongathathi hlangothi. Ukuba isitayile sakho sincike kwi-edgy kunye ne-rocker-chic, unokujonga i-bolero ehlotshiswe ngama-grommets okanye ama-studs; ukuba ungaphezulu kweklasikhi, akukho-frills dresser, bambelela ngokulula, ukusika okucocekileyo ngamagxa abukhali kunye nesheen ethambileyo.
Shrugs ziyasebenza; bafihla ulusu olungenanto, bajongeka bakhulu nge-empire-esinqeni kunye neelokhwe ze-maxi kwaye banokude bathathe ingqalelo kude neengxaki, njengeengalo ezisindayo. Khetha iitrugs ezenziwe ngezinto ezilula, ngakumbi ukunxiba ihlobo.
Beka i-shrug ngaphezulu kwetanki ephezulu kunye ne-jean encinci kunye nezithende. Olu jongeko lutsha, lwanamhlanje kwaye lukhazimlisiwe ngaxeshanye, kwaye likuvumela ukuba ubonise ubucwebe obugqwesileyo kuba bungagubungeli kakhulu ngaphezulu.
Apho unokuthenga khona
Akumangalisi ukuba zombini izihlangu kunye neebhatyi zebolero ziyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zabathengisi. Izitayile ezinxibayo zazo zombini iintloko zihlala zifumaneka kumasebe okugcina iimpahla. Jonga iivenkile ezinje ngeMacy's kunye neNeiman Marcus kwezi ngokukodwa.
Ukuba uzingela i-shrug engaqhelekanga, uya kubafumana ngobuninzi ekuqaleni kwentwasahlobo nasehlotyeni. Ivenkile ezinje nge-Old Navy kunye ne-Forever 21 zithwala ii-shrugs ezifikelelekayo kuluhlu lwemibala. Ukuba umtsha kwinkangeleko kwaye ufuna ukukunika uvavanyo, kububulumko ukuthenga i-shrugay 'yokulahla' kwenye yezi venkile, ukuba kunokwenzeka ungathandi inkangeleko.
Ukuhonjiswa Kwegadi Iziporho Abs And Core Workouts Imifuno Igadi Ukukhulelwa Mayeza
yimalini umntu oneminyaka eli-14 ubudala ekufuneka eyilinganisile
Kuthatha ixesha elingakanani ukhwekhwe ukuphola ebusweni bakho
Iindleko zokwakha iiyunithi zokugcina unyawo ngesikwere
Yeyiphi inkampani yabucala engoyena mqeshi mkhulu eMelika?
zixabisa malini iincwadi zam